Ciidamo ka tirsan AMISOM oo ka baxaya Soomaaliya | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Ciidamo ka tirsan AMISOM oo ka baxaya Soomaaliya
Ciidamo ka tirsan AMISOM oo ka baxaya Soomaaliya
Ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM gaar ahaan kuwa ka socday dalka Uganda ayaa lagu wadaa inay ka baxaan Soomaaliya kadib markii ay soo geba-gabeeyeen safar hal sano qaatay oo ay ku joogeen Soomaaliya,iyaga oo qeyb ka ahaa Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM).
Ciidamadaan ayaa Sabtidii todobadkaan waxaa loo qabtay Munaasabad lagu guddoonsiiyey billadaha Midawga Afrika iyo shahaadooyin,kuwaas oo loogu aqoonsaday kaalintooda ku aaddan hannaanka amniga iyo nabadda Soomaaliya oo ay qaateen.
Taliyaha Ciidamada AMISOM, Lt. Gen. Tigabu Yilma, ayaa ku amaaney ciidamada baxaya sida ay uga qeyb qaateen sugida Amniga gobolka Shabeellaha Hoose iyo Caasimada Muqdisho oo ay ka howlgelayeen.
“Waxaad xoreeyeen deegaannada, Sabiid-Caanoole, Ceel-Saliini, Bariire, iyo Awdheegle, iyo Baledogle iyagoo kaashanaya Ciidamada Dowladda Soomaaliya. Afrikan ahaan, waxaan idinku amaanayaa inaad naftiina u hurteen nabad galyada Soomaaliya iyo bariga Afrika, ”ayuu yiri Lt. Gen. Tigabu.
Ku-xigeenka Wakiilka Gaarka ah ee Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika (DSRCC) ee Soomaaliya, Simon Mulongo, oo ka hadlayay munaasabadda wuxuu ciidamada ku ammaanay xiriirka wanaagsan ee ay la leeyihiin Ciidanka Qaranka Soomaaliyeed iyo shacabka intaba si ay uga qeyb qaataanb sugida amniga Gobolo badan oo Soomaaliya ah.
“Waxaan ugu hambalyeynaynaa Taliyaha Qaybta iyo dhammaan halyeeyada qaybta inay u soo jeesteen sharaftii Midowga Afrika iyo dadka Afrika,” ayuu yiri Mulongo.
Brig. Michael Kabango, oo ah taliyaha guutada Ugandha ee dhameystay holwgalkooda Soomaaliya ayaa ku amaanay saraakiishiisa, rag iyo dumarba, sida ay u taageereen gudashada waajibaadka AMISOM ee loo xil saaray inta ay ku sugnaayeen Soomaaliya.
Si kastaba Soomaaliya ayaa waxaa haatan ka howlgalla Ciidamo farabadna oo Afrikaan oo ku howlgalla Magaca AMISOM,kuwaas oo ka kala socda dalalka,Ugaandha, Burundi, Itoobiya, Jabuuti, iyo Kenya.